Ukuhlelwa kweaudiyo nevidiyo ngeScreencast-o-matic kunye noPhicotho. -Izixhobo zeGeofumadas
NgoNovemba, 2018 Ukufundisa i-CAD / GIS, Ukuprinta kokuqala
Xa ufuna ukubonisa isixhobo okanye inkqubo, uninzi lweengcali zibhenela kwizifundo zevidiyo kumaphepha awodwa ngesihloko, yiyo loo nto abo bazinikeleyo ekwenzeni umxholo wemultimedia kufuneka bathathele ingqalelo izinto ezinokuchaphazela izixhobo ngexesha lokudalwa kwazo. njengokulalelwayo. Eli nqaku liza kubonisa ezinye izixhobo zokuhlela iaudiyo kunye nevidiyo emva kokudalwa kwayo, ezi ziya kuvumela ukuphelisa, ukufaka imifanekiso okanye ukunciphisa izandi ezinokuthintela ukucaca kwesifundo sevidiyo.
Kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba ngokuxhomekeke indlela yokuthetha yesithethi, okusingqongileyo apho irekhodi, kunye nezibonelelo njengoko imibhobho (kuquka indawo yayo, umgama ukusuka isithethi okanye ngokukhuhla), iintlobo ezahlukeneyo izandi kufuneka, ezifana: Ukuphefumla qatha okanye olunamandla, izandi ngaphandle ezifana umoya, imvula, amanyathelo, kokuphatha izixhobo (konqakrazo lwe mouse okanye nqakraza), ukuba unalo script ividiyo ephepheni usenakho uve isandi amagqabi, phakathi kwabanye abaninzi emva koko yenze kube nzima Imithombo ye-multimedia iyakuthandeka umphulaphuli kwaye ingaqondakala kalula.
Kungenxa ngasentla lizisa isifundo ngendlela ngaphandle, hlela kunye odiyo ukungenisa ngoko ukuba abhalwe isandi, nendlela ukongeza i-ntetho umfanekiso kunye namagama ividiyo emva kokugqiba lokurekhoda.
Ekuqaleni, i-video tutorial eyenziwe ngaphambili kunye nayo iqulethwe i-audio ikhethiweyo, kulo mzekelo siya kuwusebenzisa enye kwifom .mp4. Njengoko isofthiwe yokuhlela iza kusetyenziswa i-screencast-o-matic ividiyo kunye nokuzithemba yeaudiyo. Kwakhona, ukulungiselela intetho engcono, kuya kufakwa umfanekiso ekuqaleni kwevidiyo ebonisa ukuba isifundo sithini.
Siye sacelwa, malunga nesifundo sevidiyo somsebenzi we-buffer usebenzisa i-ArcGIS PRo, apho kufuneka senze izilungiso ezilandelayo:
Sitshintsha ubungakanani benqanawa ukuya kwi-1280 x 720.
Yenza umfanekiso kunye nesicatshulwa ekuqaleni nasekupheleni kwevidiyo.
Hlela umsindo, ukucoceka ingxolo yengxolo kunye nezandi ezingahlelwanga.
Ukulandelelana kwamanyathelo esiwabonisayo kushwankathelwe, kodwa kwividiyo ethiwe thaca esiphelweni inokubonwa ngakumbi. Phambi kokuqala kwale nkqubo, ezi nkqubo zikhankanywe apha ngasentla mazifakwe kwikhompyuter, i-screencast-o-matic y nokuzithemba,
1 Ulungiso lwevidiyo
Inyathelo 1. Vula ividiyo: Iqala ukulayisha ividiyo kwiqonga i-screencast-o-maticXa uvula, ukhetho lokuhlela luya kuboniswa apho iaudio iya kukhutshwa khona kwaye iguqulwe kamva kwaye izixhobo zokubeka umfanekiso wentetho yevidiyo ikwakhona. Asinankcukacha ngakumbi malunga nento eyenziwa yi-screencast-o-matic kuba siyenzile ngaphambili inqaku ngaphambili.
Inyathelo 2. Ukuwaleka umfanekiso kwividiyo: Xa uvula hlela khetho, i window entsha, apho zifumaneka khona izixhobo, ukuze ufake umfanekiso ukubonisa ividiyo iyavezwa, kufuneka ukhethe umfanekiso ukhetho ukusibeka, ifayile oluhambelanayo wafuna kunye ukuzolula okanye izivumelwano, elungelelanisa nexesha ukuba kufuneka unikeze ividiyo.
Inyathelo 3. Ukugquma umbhalo kwividiyo: Emva koko uxwebhu oluhambelanayo lubekwa, kwinqununu yesikhokelo esicwangcisiweyo kwaye i-parameters ifakwa ngokwemizobo yombhalo, umbala kunye nobukhulu, kwaye xa ilungile, utshintsho lwamkelwe.
Inyathelo 4. Khuphela ezi zaleki kwenye indawo yevidiyo: zombini seqela zikhutshelwa, zombini umfanekiso wesiqalo njengo isihloko, ibekwe ekupheleni ividiyo ukugqiba imo tutorial, ukuba ibekwe kwimephu lesiphelo video izinto kushicilelwa baxhoma.
Ukulungiswa komsindo kusetyenziswa inkqubo yoPhicotho-zincwadi, esimahla kunye nomthombo ovulekileyo, unokurekhoda, uhlele, ungenise ngaphakathi kwaye uthumele ngaphandle iaudiyo. Inemisebenzi enjengokudijithali naluphi na uhlobo lwesandi kwimithombo efana neekhasethi okanye iirekhodi zevinyl. Iyafumaneka kwiWindows, iMac OsX, kunye no-Ubuntu, akukho mfuneko yokufaka inkqubo kuba ikwanenguqulelo ephathekayo.
Inyathelo 1. Rhweba ngaphandle iaudiyo kwifomathi yewawa: Xa ufaka kwisithuba sokuhlela i-screencast-o-matic, kukho iphaneli apho umculo okanye umsindo oqulethe ividyo ikhona, esi saziso siya kukhishwa kwaye sithunyelwe kwifom ye .wav ukuze sikwazi ukuhlela inkqubo nokuzithemba,
Inyathelo 2. Vula isandi kwi-Audacity: Emva kokukhupha i-audio, ivula kwiprogram nokuzithemba, ngeFayile-Vula ukhetho, xa ulayishwe kwinkqubo ungayibona imephu yeaudio ethe yathunyelwa kwelinye ilizwe ivela kwiscreencast. Iingoma ezininzi zinokulayishwa kule nkqubo. Kubalulekile ukumamela yonke ifayile ukumisela ukuba zeziphi iindawo oza kuzithulisa okanye uzisike, kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba ukuba isandi sokucheba asisayi kudibana nexesha levidiyo, kuyacetyiswa ukuba kukho yimpazamo ukusebenzisa isixhobo esisimumu ukuze ubude bomsindo buqhubeke ukuthelekisa ividiyo.
Ukuba xa uvula iaudio kwinkqubo ayiviwa, kungenxa yokuba imakrofoni kufuneka iqulunqwe, imenyu yokuhlela - ukhetho - izixhobo - ukudlala kwakhona kukwiphaneli ephambili. Apho kuya kufuneka ukhethe isixhobo sokuva osisebenzisayo.
Inyathelo 3. Ukuncitshiswa kwengxolo: Ukunciphisa ingxolo, icandelo lokuthula liyakhethwa, ukubamba ingxolo oza kuyikhetha; oku kwenziwa kwimenyu yeziphumo, ukunciphisa ingxolo. Emva koko yonke ifayile yeaudio ikhethwe ngokucinezela i-CTRL kunye no-A, okanye kwimenyu ephambili unokufumana isixhobo esikhethiweyo, apho ukhetha ukhetho, emva koko kwimenyu yesixhobo isixhobo sokunciphisa ingxolo sikhona. Emva koko, ivula iwindow apho iiparameter zichaziwe, kule meko zihlala zingagqibekanga kwaye zamkela ukuqhuba inkqubo. Enye iwindow iya kuvela ibonisa ukuba ukuncitshiswa kwengxolo kuqala nini kunye nexesha eliqikelelweyo lokuba eli nyathelo liza kugqitywa.
Kwi Effect menu, oluninzi izixhobo eziza kusetyenziswa kule umsindo xa kuyimfuneko elise, uyakwazi ukucima izandi konqakrazo mouse, bunjani odiyo, ukuphucula umgangatho bass, ukubuyisela, phinda, compress okanye ukutshintsha isantya.
Inyathelo 4. Coca izandi ezingacwangciswanga: Emva kokuncitshiswa kwesandi, kuyagqitywa ukuba iinxalenye zesandi ziqulathe imisindo engalindelekanga okanye uhlobo oluthile lwempazamo, isikhombisi yonke indawo ehambelana nengxolo (4) ikhethiwe, kwaye ngokuchaneka ngakumbi ekukhetheni amaqhosha okusondeza ( +) Kunye (-). Ukuvumela ukwandisa okanye ukunciphisa imephu yeaudio kwaye ufumane ngokulula ingxolo eza kupheliswa.
Inkinobho yokusika: ngeli qhosha ufumana kuphela isiqwenga esikhethwe ngesikhokhelo, oko kukuthi, siphucula isikhala esinye kuphela kwi-audio. Ukuba kuyadingeka ukunciphisa inxalenye yomsindo, ngaphandle kokuguqula okanye ukuphelisa abanye, isetyenzisi isisetyenziswa.
Inkinobho yokuThula: eli qhosha likhetha imisindo ecasulayo kwaye isuse yonke imizila.
Sondeza ngaphakathi nangaphandle: kunceda ukujonga kakuhle imephu ephilileyo.
Ewe kunjalo, njengoko sele ubonile, iAudaCity ikuvumela ukuba wenze ukucoca ngakumbi ingxolo kunye nokulingana kwetoni, ukufezekisa iaudiyo esemgangathweni. Kule vidiyo, ugxile ekunciphiseni ingxolo yangaphakathi kunye nokucoca izandi ezingacwangciswanga ngamaxesha okuzola.
Njengoko ubonile, khange sisebenzise ukhetho ukusika iaudiyo, kodwa ukuyithulisa ingxolo engacwangciswanga, kuba sihlala kwifayile egcina ubude bexesha ukuze singalahlekani ngokuhambelana nevidiyo. Ukuba ibililizwi kuphela, ngesinqumle ukunciphisa ukuthula okungafunekiyo, apho ividiyo okanye imifanekiso ehambelanayo nesandi sokugqibela siyakongezwa.
Le misebenzi ivumela ukuphathwa ngokulula kwethrekhi enye okanye ezingaphezulu, ungalungisa naluphi na utshintsho ukuba ukusika okanye ukuthula kusenziwa ngexesha lokuhlela, ikwakhona neendlela ezimfutshane zekhibhodi. Ukuba kukho imfuneko, ngale nkqubo ungongeza isandi ukuphucula isandi, njenge-echo, inversion, okanye ithoni.
Inyathelo 5. Thumela ngaphandle iaudiyo eVakalayo: Nje ukuba ukugqitywa kokugqitywa kwefayile yeaudio kugqityiwe, kukhutshelwa ngaphandle kwifomathi yewawa, (nangona kunjalo kukho ezinye iindlela ezinje nge .mp3, -aiff, .ogg okanye .au) kwifayile yemenyu-ukuthumela ngaphandle njenge-wav, eli nyathelo lenziwa ukuyifaka kwakhona kwividiyo i-screencast-o-matic,
Inyathelo 6. Yenza ubungakanani kwakhona bekhanvasi yevidiyo: Emva kokugqitywa kwenkqubo yokuhlelwa kweaudiyo nevidiyo, ifayile iyagcinwa, kuthathelwa ingqalelo ukuba ukubonwa ngcono kobungakanani bevidiyo ye-canvas kufuneka ibengu-1280 x 720, ukuba ividiyo ayihambelani nobukhulu, inokutshintshwa ukhetho lwe-canvas, ukhetha i-720p HD. Inkqubo ivumela nokongeza imvelaphi emnyama kubungakanani obungagutyungelwanga yividiyo yoqobo, okanye ukolula esele ikho ukuze ilingane nokuba ilahleko ngenxa yokuba ividiyo ibingenawo umlinganiso ofanayo.
Xa kuqwalaselwa njengelungile, iqhosha liciniwe Yenzelwe, ngenxa kugqiba igama, ifomathi, ukuba isalathisi ibonisiwe, indawo apho ividiyo ikhunyelwa khona kwaye ekugqibeleni ukhethe umgangatho wokuvelisa okuphakathi komgangatho ophantsi, oqhelekileyo okanye ophezulu, ekugqibeleni ividiyo ipapashwe.
Zombini iinkqubo zinika umsebenzisi lula ukuhlela, izixhobo zabo kulula ukufunda ukufunda lolu hlobo lwenkqubo, ingakumbi kulabo bayingxenye yamagumbi okufundela i-2.0 kwaye basebenzise olu butyebi njengendlela yokufundisa.
Ividiyo ebonisiweyo sisishwankathelo. Ukuba ufuna ukufikelela kwividiyo epheleleyo, yicele nge-imeyile okanye i-whatsapp ekwi-header yale ndawo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini INgqungquthela Yonyaka Yonyaka ye-Inter-American Network of Cadastre kunye neRejista yoMhlaba
Post Next Impembelelo yenguqu ukusuka kwi-ArcMap ukuya kwi-ArcGIS ProOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Ukuhlelwa kweaudiyo nevidiyo ngeScreencast-o-matic kunye noPhicotho."
Uchaza ngokubulala, akukho nto iqondwayo ukuba yenzeni….